फेरि ह्वात्तै घट्यो प्याजको मूल्य – Online Marg
Posted on Friday, February 14th, 2020 10:34 AM by अनलाइनमार्ग डट कम डेस्क
प्याजको मूल्य घटेर प्रतिकेजी सय रुपैयाँ भन्दा तल झरेको छ। कुनै समय २ सय ५० रुपैयाँ रहेको प्याजको मूल्य अहिले घटेको हो। उपत्यकाकै सबैभन्दा ठूलो तरकारी बजार कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा गत आइतबारदेखि प्रतिकेजी खुद्रा प्याजको मूल्य ९० देखि एक सय रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै प्याजको थोक मूल्य पनि प्रतिकेजी ७२ देखि ७५ रुपैयाँसम्म रहेको कालिमाटी बजारको सूचनामा उल्लेख छ। गत सिजनमा भारतमा प्याजको उत्पादनमा कमी आएपछि प्याजको मूल्य बढेको थियो। त्यसमा पनि विदेश निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाएपछि भारतमा निर्भर नेपाली प्याजको बजारमा मूल्य आकासिएको थियो।
त्यतिबेला चिनियाँ प्याजको केही मात्रामा आयत भएपनि मूल्य भने घटेको थिएन। नेपालमा उपभोग गरिने ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्याज भारतबाट आउने गरेको बताइन्छ। प्याजको सिजन सुरु भएसँगै मूल्य पनि घटेको हो। फेब्रुअरीदेखि बजारमा नयाँ प्याज आउँछ। यो वर्ष उत्पादन बढेकाले पनि मूल्य सुधार देखिएको छ। तर भारतले नेपालमा प्याजको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छैन।
कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा उपनिर्देशक विनय श्रेष्ठ अहिले भारतीय प्याजनै विक्री भइरहेको बताए। उनले भने, भारतले प्रतिवन्ध फूकुवा नगरेपनि खुकुलो भने भएको छ। त्यसले प्याजाको आयात बढेको हो।
फेरि बढ्यो सुनचाँदीको मुल्य, कति पुग्यो ?
नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मुल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महांसघका
अब हजारको नेपाली नोटमा यस्तो चित्र आउदैँछ, थाहा पाईराख्नुहोस् है !
अब हजारको नोटमा दुईवटा हात्ती भएको चित्र राखिने भएको छ । अहिले प्रचलनमा रहे�
नेपाली बजारमा सुनको भाउ बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ�
नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा वृद्धि भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनाम�
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार (पुस १८) जारी गरेको विनिमयदरका अनुस�
‘देशले अल्पकालिन मात्रै नभइ मध्यकालिन र दीर्घकालिन लगानी मागि राखेको छ’: अर्थ मन्त्री खतिवडा
अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले मुलुकमा अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुन ला�
फेरि घट्यो प्याजको मूल्य !
चीनबाट प्याज भित्रिन थालेपछि नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य घट्नेक्रम जारी छ
ग्लोबल आइएमई बैंकको एटिएम सेवा अब बिराटनगर महानगरपालिका कार्यालय परिसरमा पनि
ग्लोबल आइएमई बैंकले बिराटनगर महानगरपालिका परिसरमा एटिएम सेवा सुरु गरेको छ
मंगलबार पनि सेयरबजारमा सुधार जारी रह्यो । यसदिन नेप्से र कारोबार दुवैमा सु�